Ultrasonic Welder plastika ho an'ny vahaolana famolahana plastika
Home / Ultrason Welder / 15KHz mpanamboatra ultrasonic / Weldery plastika ultrasonic ho an'ny vahaolana famolahana plastika
Sokajy: 15KHz mpanamboatra ultrasonic, Ultrason Welder, welder Tags: mividy lasera plastika ultrasonika, mpanome tanana tanana, sonic plastika lasantsy, sonic lasantsy, mpanome plastika ultrasonic, ultrasonic lasantsy plastika, milina famonosana plastika ultrasonic, Mpanotrona ultrasonic, ultrasonic welder amidy, mpanamboatra mangarahara ultrasonic, vidin'ny fanodinana ultrasonic, mpamatsy fanodinana ultrasonic, fanodinana ultrasonic, milina famandrihana ultrasonic
Lasera plastika ultrasonika | kofehy ultrasonik | milina fantsom-panafody plastika sonika miaraka amina fanenjehana matetika
♦ Ny fanenjehana tsy tapaka mandeha ho azy, mety ho an'ny haben'ny fanodinana maty sy famolavolana endrika famolavolana, fametrahana mandeha ho azy matetika: ± 400HZ
Ohatra: 15KHZ ultrasonic, ny hatrizay amin'ny famolavolana bobaka amin'ny 14.4-15.2KHZ dia mety ho traceability matetika
♦ Ny fampiasana solosaina CPU hanaraha-maso programa hafa dia haingana sy azo ovaina. Ny asan'ny rafitra fiarovana "fanaraha-maso fiarovana ny rafitra" dia hamaly ireto toe-javatra manaraka ireto: avo loatra ny mari-pana ary avo loatra ny tsindry, izay miteraka fihoaram-pefy. Ny tondra-drano mahery vaika an'ny mpamokatra ultrasonika, ny famahana ny loder solder, transducer na transducer, tsy fahombiazan'ny circuit generator, sns.
♦ Ny fanarahana mandeha ho azy dia ahafahan'ny mpanamboatra ultrasonic manara-maso sy mandeha amin'ny oniversite matetika. Rehefa avo loatra ny mari-pana, dia mitafy eo amin'ny lohan'ilay lohamangazo na ravin-doha eo amin'ny loha, hitranga io fiovana io.
♦ Nataon'ny rafitra amplitude tsy tapaka. Ny amplitude ultrasonic dia azo zahana avy amin'ny 50% ka hatramin'ny 100% tsy misy stepless hifanaraka amin'ny asa welding samihafa.
♦ Miaraka amin'ny IGBT, ny hafainganam-pandehan'ny fihetseham-po dia avo 100 heny haingana noho ny fantsom-bolo silika gel silika nentim-paharazana.
modely 1520A 1526A 1532A 1542A
fahafahana 10-20 kali / min
Fomba fiarakodia Pneumatic
Lamaoka (Horn Journy) 75mm 100mm
Fotoam-pifidianana 0.01-9.99S ​​azo ampifanarahana
Faritra welding Φ100 Φ200 Φ300 Φ400
Fomba fanaraha-maso Ny fifehezana isa
Mianjera amin'ny rivotra 1-7 Bar
1. Weldery plastika ultrasonika, fanitsiana tanana, tsotra ampiasaina sy fikojakojana.
2. Nofefy amin'ny fotoana, fahatarana ny fotoana, fanam-potoana ary hihazona fotoana. Ny fanerena miasa dia mety hovaina.
4. Ny singa pneumatic tsara dia tsara sy avo lenta
5. Transducer sy kalitao avo lenta.
6. Fiarovan-tena: Fiatoana tsy miato, matetika ny hafanana
7. Azo alaina amin'ny 4 15 - 20 KHz, 35 KHz, 40 KHz ary XNUMX KHz.
8. Ny fanovana fitakiana haingana, ny tanjaky ny welding avo.
9. mety amin'ny karazan-tsaramaso avo sy ny fotoana fihodinana fohy.
Mpanamboatra plastika ultrasonika \_ Masinina plastika fantsom-pandrefesana ultrasonic dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiara, indostrian'ny elektronika, indostrian'ny fitsaboana, fitaovana ao an-trano, akanjo vita amin'ny tenona, kojakoja amin'ny birao, indostrian'ny fonosana, indostrian'ny kilalao, sns.
Orinasa automatique: Fomba vatana plastika, vavahadin'ny fiara, dashboard an'ny otomotika, jiro, fitaratra, mpijery masoandro, faritra anatiny, sivana, fitaovana fitaratra, spike reflektika, batroka, tariby plastika ho an'ny môtô, Radiator, tanki-tsiran'entana, fitoeran-tsolika, fitoeran-drano, solika tank, hose rivotra, mpanadio masinina, takelaka misy, sy ny sisa.
Elektronika plastika: mitafo rano alàlan-javaboary, fitaovam-pifandraisana, finday tsy misy tariby, kojakoja finday, tranga finday, raharaha batterie, vata famatsiana, fikojakojana fikojakojana miendrika asidra, bateria flofy misy in-3, U disk, karatra SD, karatra CF, fifandraisana USB, Bluetooth fitaovana, sy ny sisa.
avoaky: fampirimana, rakikira, boaty amorom-baravarankely, birao goavambe, kitapo fanoratana, carteaux tinta, carteaux toner, sy ny sisa.
Ny vokatra ara-pitsaboana sy isan'andro: famantaranandro, kojakoja an-dakozia, kapoakano tavoahangy vava, kitapo fisotroana entana, kojakojan-telefaona finday, borosy malefaka volamena, sy ny zavatra ilaina isan'andro, fitantanana, fehiloha fiarovana, tavoahangy makiazy, vilany fisotroana, milina fanasana, rivotra dehumidifier, baomba herinaratra, kesika herinaratra, mpanadio vaky. , mpandahateny, firakotra sy metaly grille tarehy sy injeniera sivily hafa sy ny sisa.
Vokatra ara-pahasalamana: vokatra ho an'ny ankizy, kidoro amin'ny rivotra, fanantonana akanjo, kojakoja momba ny zaridaina, kojakoja fanadiovana any an-dakozia, fandroana, loha fandroana, sns.
Fampiharana fanamafisam-peo ultrasonic: Ny PVC madio, ny PET na ny plastika misy atiny mihoatra ny 20% ny votoatin'ny PVC dia voaisy tombo-kase, vita amin'ny hafanana vita amin'ny hoditra, na voaisy tombo-kase ny lamba, ary azo ampiasaina ny fitaovana ilaina manokana; ny laharam-pahamehana dia misy embossing ny kiraro sy satroka amin'ny hafanana, embossing ny fitafiana, kilalao, mari-pamantarana, kitapo, Fitaovana orana, fitaovam-pitaterana, boaty mivalona, ​​kitapo CD, kitapo fonosana, boaty maso, rakikira, rakikira sary, karatra fandraharahana, notepad, vokatra elektronika, fitaovana, fanatanjahantena fanamafisana hafanana, famehezana fonosana amin'ny bateria sns. matetika ampiasaina amin'ny plastika, Elektronika, fitaovana elektrika, kojakoja fiara, fonosana, fiarovana ny tontolo iainana, fitaovana fitsaboana, lamba tsy tenona, kilalao, fitaovam-pifandraisana ary indostria hafa.
Masinina fanamafisam-peo mason-tava masonika ultrasonika
Fitaovana lamba fanenon-tena ultrasonic ho an'ny lasantsy lamba tsy roa
Lasera maska ​​ultrasonikà tanana ho an'ny saron-tava sy famatorana KN95
saron-tava masinina lasitra ultrasonika masera, welder ultrasonika saron-tava azo entina